साहित्यसुधा Archives - Current Nepal News
‘नथिया’ की लेखिका सरस्वती प्रतीक्षाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
माघ २३,काठमाडौँ। उपन्यासकार सरस्वती प्रतीक्षाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ। वादी समुदायको विषयमा केन्द्रित रहेर लेखिएको उपन्यास ‘नथिया’ की लेखिका प्रतीक्षाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको हो। नियतवश वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने गरी उपन्यास लेखिएकोे दाबी उजुरीकर्ताको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसार प्रतिक्षाविरुद्ध केही दिनअघि उजुरी परेलगत्तै प्रहरीले उनलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, उनी हालसम्म प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएकी छैनन्। उपन्यासमा रहेका [विस्तृतमा...]
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आत्मकथा ‘न्याय’ सार्वजनिक
असोज ६,काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आत्मवृतान्त ‘न्याय’ सार्वजनिक भएको छ। बुक हिलले प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई लेखक सुशीला कार्की, उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदी, शिक्षाविद् डा। केदारभक्त माथेमा, चिकित्सा अभियन्ता डा.गोविन्द केसी र वरिष्ठ अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधिश कार्कीले न्यायालयमा राजनीतिक ‘प्रभाव र दबाव’ पर्न नदिन नहुने बताएकी छिन्। कार्यपालिकाको दबाव र प्रभाव परे न्यायालय कमजोर हुने उनले बताइन्। ‘न्यायपालिका [विस्तृतमा...]
रेडियो नेपालका पहिलो गायक तथा नाट्यकर्मी हरिप्रसाद रिमालको निधन
भदौ १५,काठमाडौं। रेडियो नेपालका पहिलो गायक तथा नाट्यकर्मी हरिप्रसाद रिमालको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। रिमालको बिहीबार राति निधन भएको हो। उनको राति १ बजेर ७ मिनेट जाँदा निधन भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ। विसं १९८२ असोज २ गते जन्मिएका रिमालको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म नयाँ बानेश्वरमा रहेको उनकै निवासमा राखिने छ। उनले आफ्नो निधनपछि कुनै किसिमको तडकभडक नगर्न भनेकाले बिहान १० बजेपछि पशुपति आर्यघाट लगेर अन्त्यष्टि गरिने [विस्तृतमा...]
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८ औँ जन्मजयन्ती
कात्तिक २,काठमाडौं। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन डिल्लीबजारमा भएको थियो । दश वर्षको उमेरमा कविता लेख्न शुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् । नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको [विस्तृतमा...]
कांग्रेस नेता एवं साहित्यकार जगदीशशमशेर राणाको निधन
असोज २४,काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद एवं साहित्यकार जगदीशशमशेर राणाको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उपचारका क्रममा सोमबार भारतको चण्डीगढमा उनको निधन भएको हो । राजनीतिक जीवनयात्रा सुरु गरेका थिए । २०१५ को आमनिर्वाचनमा अछामबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका राणाले गोरखा परिषद्को केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । २०१७ सालको ‘कू’ पछि गोरखा परिषद्का सबै नेताका साथ राणा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०५० मा [विस्तृतमा...]
हरिवंशको उपन्यास ‘हरिबहादुर’को विमोचन मदनबहादुरले गरे
वैशाख २३, काठमाडौं। ‘चिना हराएको मान्छे’ को सफलतापछि चर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले उपन्यास कृति ‘हरिबहादुर’ लिएर आएका छन् । हाँस्य कलाकार आचार्यको पुस्तक ‘हरिबहादुर’ को बिमोचन आज शनिबार गरिएको छ । शनिबार राजधानीमा बिमोचन गरिएको पुस्तक अर्का हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले विमोचन गरेका हुन् । विमोचन अगाडि हरिवंशले प्रहशन प्रदर्शन गरेका थिए । उनले प्रहशन मार्फत आफ्नो पुस्तकमा समाजमा रहेका विद्यमान विकृति र विसंगतीको चित्रण गरिएको सन्देश दिँदै हरेक व्यक्तिमा सकारात्मक पक्ष [विस्तृतमा...]
पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ सार्वजनिक
फागुन ८,काठमाडौं । पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले लेखेको ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। अर्थतन्त्रबारे सरल भाषामा लेखिएको पुस्तक पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, अर्थविद् विश्वम्वर प्याकुरेल, आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले सार्वजनिक गरेका हुन्। बुढाथोकीले सामान्य मान्छेहरुलाई देशको अर्थतन्त्रबारे बुझाउने पुस्तकको अभाव पूर्ति गर्न ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ पुस्तक लेखेको बताए। उनले भने, ‘अर्थशास्त्र नबुझ्ने मान्छेले नेपाली [विस्तृतमा...]
सुबिनले ल्याए ‘मनसुन’
असोज ८,काठमाडौं । युवा लेखक सुबिन भट्टराईको नयाँ कृति ‘मनसुन’को विमोचन शनिबार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको डबलीमा भयो । पुस्तकको विमोचन गायक प्रमोद खेरल र लेखकले संयुक्त रुपमा गरे । मनसुन सम्झाउने झरीलगत्तै सुरु भएको कार्यक्रममा गायक खरेलले ‘मबिना कसैकसैलाई मुश्किल छ पोखरामा’, झुम्कावाली’जस्ता लोकप्रिय गीत सुनाएर विमोचनका सहभागीलाई मुग्ध बनाएका थिए । खरेलका गीतपछि कार्यक्रम प्रस्तोता सबिना कार्कीले भट्टराईसँग छोटो संवाद गरेकी थिइन् । भट्टराईले मनसुनबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ [विस्तृतमा...]
भिखारी र भिखारीहरु
सुरेन्द्र सुमन सबैले उसलाई माग्ने भन्छन्, भिखारी भन्छन् । बच्चा काखमा च्यापेर बजारकाvप्रत्येक गल्ली र चोकहरुमा ऊ डुलिरहेकी हुन्छे, डुल्दै गर्दा पाँच, दश रुपैया आफ्नो गुजाराको निम्ति मागिरहेकीहुन्छे । यो उसको दिनचर्या हो । बजारका प्रत्येक मान्छेहरु उससँग परिचितछन्, त्यसैले त ऊ नजिकजाँदा तर्केर भाग्ने गर्छन् । या फेरी ऊ नजिकहुदाहप्काएर धपाउने गर्छन् । उसको बोल्ने ठेगान हुदैन । उसलाई पैसा माग्नकुनै समय चाहिन्न । जो कोही जतिबेला जहाँ निर भेटिन्छ, त्यहीनिर पैसा माग्ने उसको आदत नै बसिसकेको [विस्तृतमा...]
काली भइछ, सेतु त !
गजेन्द्र बाेहरा उसले मेरो कट्टु तान्दिई । अरुहरु हाँसे । सायद लजाएछु । मेरो मुख रातो भयो । मानौं उसले चिथोरेकी छे । मलाई थाहा छ, म केटा हुँ । अनि ऊ केटी हो । त्यसैले त मलाई काले भन्थे । अनि उसलाई सेतु भनेर बोलाउँथे, सबैले । तर मलाई थाहा भएन कि उसले मेरो कट्टु तान्दा अरुहरु किन हाँसे ? अनि म नि , म फेरि किन लाजले मरेँतुल्य भएँ त ! ओए…. तेरो स्वास्नी काँ छिन् त ? ’म त पुरानै संसारमा हराएछु । त्यो वर्षाको समय थियो सायद । म बाख्रा चराउन गएको थिएँ । अरुले उसलाई दिदी भन्नु भनेर सिकाएका थिए । ऊ हामीभन्दा ठूली [विस्तृतमा...]